Wargeyska Mirror oo baahiyay inay Manchester United tallaabo horumarineed u qaadday saxiixa Jadon Sancho… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Wargeyska Mirror oo baahiyay inay Manchester United tallaabo horumarineed u qaadday saxiixa Jadon Sancho… (Maxaa soo kordhay?)
(Manchester) 06 Juun 2021. Wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegaya inay kooxda Manchester United kusii dhowaaneyso saxiixa xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Naadiga Man United ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaartay xiddiga Dortmund sida uu sheegay wargeyska Mirror ee kasoo baxa dalka England, inkastoo uusan shaacin qodobbada ugu muhiimsan heshiiska sida sanadaha uu kula joogi doono iyo mushaharka uu ka qaadan doono.
Dhinaca kale, kooxda Jarmalka ka dhisan ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay iibinta Sancho waxayna ku qiimeyneysaa lacag dhan 90-95 milyan oo euro.
21-jirka xulka qaranka England ayaa qudhiisa doonaya ku biirista garoonka Old Trafford xilli ay xusid mudan tahay in xagaagii hore kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ay ku guuldarreysatay saxiixa laacibkan.
Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaa haatan diyaarineysa dalab rasmi ah oo ay la hor tageyso miiska wada-xaajood labada naadi si ay uga gor-gortamaan iibka xiddiga garabka ka ciyaara ee Jadon Sancho kaasoo ah bartilmaameedka ugu muhiimsan ee Manchester United suuqa xagaagan.
Kooxda Heegan oo Galabta guul ka gaartay Mogadishu City Club kulan la bixiyey labo kaar oo casaan ah ... + SAWIRRO